Excel illaa Google Earth, laga bilaabo iskuduwaha UTM - Geofumadas
Febraayo, 2012 Downloads, Featured, Google Earth / Maps
Bal aynu eegno kiiska:
Waxaan u tagay beerta si aan u dhiso guri, sida ku cad miiska soo socda iyo waxaan doonayaa in aan ku sawiro Google Earth, oo ay ku jiraan labo sawir oo aan qaatay
Cajaladda qaab-dhismeedku waa kan kaliya:
Isbedelka UTM isuduwidqaab juquraafi ah qaabka jajab tobanle, maxaa yeelay waxay tahay waxa Google u baahan yahay
Waxay kuu oggolaaneysaa inaad habeynta magaca faylka loogu talagalay
Keen magaca lakabka kml
Dib u soo celi faylka jira, xitaa haddii uu horayba u soo saaray
Waxay u ogolaaneysaa in ay adeegsadaan html html ee sharaxaadda, sida sawirada, hyperlinks, iwm.
Template wuxuu diyaar u yahay Spheroid si loo doorto, waxaan ognahay in Google Earth waa in aan doorano WGS84.
Sadarka kowaad waxaan soo galineynaa macluumaadka uu Google muujinayo Label.
Labada soo socota ee UTM iskuduwaha, ka taxaddar in nidaamkeenna loo qaabeeyey in loo isticmaalo jumlada iyo barta barta kala-jajab tobanle sida kumanaan kala-goys. Marka isku-duwaha sida 599.157,90 lama oggola waa in loo qoraa 599157.90
Tiirka soo socda waxaan galeynaa aaga. Kaliya adiga oo ku dhejiya safka koowaad, kuwa kale waa la beddeli doonaa. In kastoo gacantooda lagu beddeli karo haddii ay dhacdo in xogta ay ku jirtay xadka laba aag. Sidoo kale, cirifka; xaaladdan waxaan u adeegsanayaa xogta Bogotá, sidaa darteed waxaan u isticmaalaa Aagga 18 iyo Waqooyiga Hemisphere.
Ugu dambeyntii sharaxaad, taas oo ah waxa aan arki lahaa marka aan gujiso dhibicda Google Earth.
Sida loo xareeyo isku-duwayaasha kuwan Google Maps ka dibna u soo qaad Google Earth
Tallaabada 1. Soo dejiso tusaalaha quudinta xogta. Si aad u isticmaasho tusaalihii aan ku muujinnay sawirada aad kartid Download template this.
Tallaabada 2. Soo rar shaxanka. Adiga oo dooranaya qaab-dhismeedka xogta, nidaamku wuxuu heegan u yahay haddii ay jiraan xog aan la ansixin karin; Waxyaabaha lagu ansixiyey waxaa ka mid ah:
Haddii ay isku xiran yihiin iskudubar isku xiran
Haddii isku-duwayaashu leeyihiin goobo aan mug lahayn
Haddii aaguhu aanay u dhexeyn 1 iyo 60
Haddii lafaha qolka labka ah waxaa jira wax ka duwan Waqooyi ama Koonfur.
Xogta sharraxaadda waxay taageertaa nuxurka html, sida midka tusaalaha ku xusan oo ay ku jiraan soo bandhigidda sawir. Weli way taageeri laheyd waxyaabaha sida iskuxiraha dariiqyada internetka ama diskiga kombiyuutarka, fiidiyowyada, ama wax kasta oo hodan ku ah.
Tallaabada 3. Muuji xogta jadwalka ku yaal iyo khariiddada.
Isla markiiba xogta waa la soo dhajiyay, miiska wuxuu tusi doonaa xogta alfasaymarta iyo khariidada goobaha juquraafiga ah; Sida aad u arki karto, qaabsocodka gelitaanka waxaa ku jira isbeddelka isku-duwani kuwan oo loo marayo habka juquraafi sida ay ugu baahan tahay Khariidadaha Google.
Mar haddii astaamaha la sii daayo, waxaad heli kartaa muuqaalka dhibcaha lagaa saaray Muuqaalka Wadada Google oo dul mar. Adoo gujinaya astaamaha waxaad arki kartaa faahfaahinta.
Tallaabada 4. Diidmada xogta. Sida caadiga ah rarka xogta wuxuu kujiraa WGS84, sida ay adeegsatay Google. Laakiin shaqadani waxay kuu oggolaaneysaa inaad u beddesho nidaam kale oo isku-duwid oo la saadaaliyay oo aad cusbooneysiiso khariidada. Tusaale ahaan, waxaan u wareegayaa Clarke 1866 oo waxaan arkayaa in geesaha dib loogu saadaaliyay khariidada.
Halkan waxaad ka arki kartaa template-ka ku shaqeeya fiidiyaha.
Tallaabada 5. Soo dejiso khariidadda Kml adoo adeegsanaya adeegga gTools.
Waxaad gashaa nambarka soo dejinta ka dibna waxaad haysataa feyl aad ka daawan karto Google Earth; Codsiga wuxuu muujinayaa meesha laga helo koodhka soo dejinta oo aad ku soo dejisan karto illaa 400 jeer, iyada oo aan la xadidneyn inta meeris ee ay ku jiri karto soo dejin kasta adoo isticmaalaya gTools API. Khariidada ayaa kaliya muujineysa isku-duwayaasha ka socda Gooogle Earth, oo leh aragtiyo saddex-cabbir oo firfircoon.
Ikhtiyaar kale: U beddel iskuduwaha faylka kml adoo adeegsanaya makro Excel ah
Marka xogta miiska la buuxiyo, magaca faylka kml iyo cinwaanka meesha lagu kaydin doono ayaa ka muuqda dhinaca midig. kiiskan wuxuu u muuqdaa sida C: \_ Career 25 X.kml
Halka hoose ee aan ku qorno magaca lakabka ku yeelan doono faylka kml, kiiskan: Shaqo-siinta 25 X
Natiijadu waa tan: adoo taabanaya dhibic waxaad soo bandhigi kartaa sharraxaadda khaanadda ugu dambeysa ee 'Excel'.
Ugu dambeyntiina, markaan diyaar u nahay waxaan ku riixnaa badhanka cagaaran, faylka waa in la soo saaray.
Natiijada, marka laga furayo Google Earth waa kuwan soo socda. Eeg magaca lakabka, sidaan ugu yeerno, ka dibna waxaa jira dhibco leh sharraxaaddiisa; taabashada iyaga ayaa kor u qaadaysa muujinta faahfaahinta. Haddii walxaha ama calaamadaha Waxay aad u ballaaran yihiin, waxaa lagu dhejin karaa Google Earth adigoo riixaya lakabka midig iyo xulashada guryaha.
Sidee loo dhigaa sawirada kml
Tani waa mid fudud, u maleyn in in faahfaahin bangiga heerka waxaan rabaa in aan soo saaro image ee saxanka cadastare, ka dibna in unugta u dhiganta sharaxaad ayaan ku qor:
Xadka hantida, bangiga heerka Cadastre
Sidoo kale, haddii ay dhacdo marka aan soo wacay sawir, waxaan doonayaa inaan sawir ka dhigo facka guriga, habka la midka yahay.
Haddii aad u baahatid in aad gashid safaf dheeraad ah, samee nuqul ka mid ah kuwa hadda jira si ay u raacaan caanaha.
Looma baahna inaad ku darto tiirar, haddii aad sameyso, waxay joojin kartaa shaqada.
Waxay ubaahan tahay inaad aqbasho fulinta macro markaad furayso faylka Excel
Haddii ay kuu soo dirto fariin qalad ah, waxay noqon kartaa in hagaha C: uusan laheyn ogolaansho qoris, waxaad isku dayi kartaa galka kale sida C: \_ isticmaalayaasha \_ downloads \_ inta feylka jiro.
Halkan ayaad ka soo dejisan kartaa fiidka kml sida ay tahay.
Ku soo degsashada shaxanka qaab-dhismeedka 'Excel' waxay u baahan tahay tabarucaad astaan ​​ah, oo aad ku sameyn karto Bixinta ama kaarka amaahda.
Haddii aad haysato waa juquraafi juqraafi ah ee Latitude, Longitude, waxaadna dooneysaa inaad u dirto Google Earth, template waa tan.
Baro sida loo sameeyo tan iyo tusaalayaal kale oo ku jira Koorsada khiyaameynta Excel-CAD-GIS.
Dhibaatooyinka caadiga ah
Waxaa dhici karta in, marka la isticmaalayo codsiga, mid ka mid ah dhacdooyinka soo socda ayaa laga yaabaa inay muuqdaan:
Qalabka 75 - Waddada faylka.
Tani waxay dhacdaa sababtoo ah waddada lagu qeexay meesha faylka kml ee la keydiyo ma aha mid la heli karo ama ma jirto wax sharci ah oo ficilkan ah.
Fikrad ahaan, waa inaad dariiq u dhigtaa disk D, oo leh xaddidaadyo ka yar disk C. Tusaale:
Dhibcooyinka ayaa ka soo baxaya Waqooyiga Pole.
Tani waxay badanaa dhacdaa, sababtoo ah daaqadaheena, sida ku qoran tilmaamaha loogu talagalay qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka, qaabeynta gobalka waa in lagu dhisaa guddiga gobolka:
-Maxkamad, kala-jajab tobanle
-Coma, kumanaan kala go '
-Coma, waa kala-saarayaasha liiska
Marka, xogta sida: 1. kun iyo toddoba boqol iyo siddeed mitir leh laba iyo toban mitir waa in loo arko 1,780.12
Muujintu waxay muujineysaa sida qaabkan loo sameeyo.
Tani waa muuqaal kale oo muujinaya qaabeynta qaabka guddiga.
Marka isbedel la sameeyo, faylka ayaa la soo saaraa mar kale kadib, dhibcooyinka ayaa u muuqda halka ay ku xirantahay Google Earth.
Haddii aad su'aal qabtid, u qor emaylka taageerada editor@geofumadas.com. Had iyo jeer waxay tilmaamaysaa nooca daaqadaha aad isticmaaleyso.
Post Previous" Hore Baro arkaysid AutoCAD
Post Next AutoCAD 3D Dabcan albaabka, waayo, $ 34.99Next »
114 Jawaabo "Excel ilaa Google Earth, laga bilaabo iskuduwaha UTM"
Sebtembar, 2020 at
Haddii aad iibsatay tusaalaha, u qor boostada taageerada ee la xiriirta boostadaada.
Badanaa kani waa boostada: tifaftiraha @ geofumadas. com
Steinar isagu wuxuu leeyahay:
Hesho calaamo HALKAN virker ikke. Hvor kan jeg får tak i den?
Hel calaamadda HALKAN ma shaqeynayo. Xagee ka heli karaa?
Salaan, miyaad la wadaagi kartaa demo ama codsi kumeelgaar ah oo tijaabo ah "Excel to Google Earth, laga bilaabo iskuduwaha UTM", kaliya ujeeddooyin waxbarasho iyo habka aan u xayeysiinayo dalabkaaga. Waad mahadsantahay
Maarso, 2019 at
Tag qaybaha gobolka ee ku yaala Windows iyo waxaad u sameysaan dhibcaha sida jajab tobanle jajab tobanlaha iyo jinsiga sida kumanaan kala go '.
Haddii aad weli shaki ka haysato inaad u qorto emailka taageerada ee la yimid iibsashada template.
Wueber Bogado isagu wuxuu leeyahay:
Waxay kaloo i geeysaa North Pole iyo darajada dhibcaha waxay ku taal Asunción del Paraguay
Miyaad iga caawin kartaa fadlan?
Febraayo, 2019 at
Dhibaatada waxaa lagu xalliyay taageero.
Waxay ahayd dhibaato la xiriirta qaababka cusub ee xafiisyada 365 iyo 64.
Ama dhibaatadu waa qaab-dhismeed goboleed ee nidaamka hawlgalkaaga.
Waa inaad dammaanad qaadataa in faaruqin la dhigo, sida calaacalaha kala-goosadka ah, oo ah faaruq ah liis kala-saarayaasha ama jajab tobanle ah.
Si aad u hesho taageerada iibsashada sawirada, u dir e-boostada taageerada ah oo la socota iibsashada.
Ulisses Ribas Junior isagu wuxuu leeyahay:
Raac tilmaamaha bogga, geli macluumaadka iyo soo noqoshada ama qaladka »Muuqaalka Aasaasiga ah ee Microsoft" Khaladaadka waqtiga fulinta «13»: Nooca Incompatíveis.
Sababta aad u dirto xogta udub-dhexaadka, waa sababta oo ah daaqadahaaga waa inaad sameysaa qaabkan:
Dhibicda, sida kala-go'aanka kumanaan
Jinsiga, sida kala-goosashada jajab tobanle
Jinsiyada, sida kala-saarayaasha liiska.
Haddii aad shaki qabto, waxaan kuu soo dirnay email.
Waxaa falaa ma xisaabaha wanaagsan, kuu soo diro si ay Cidhifka Waqooyi ee, waxaan ku sameeyey xitaa macluumaadka soo socda sida ee Excel oo kuu soo diro Pole Waqooyi, waxa ay u muuqataa kaftan in cobreis wax iyo kor uma shaqeeyo, rajo xallinta dhibaatada.
Haddii aanan dalbanin lacagta lacageed.
Miyaad xaqiijisay wadada feylka la socota?
Waan socodsiiyaa barnaamijka oo waxaan ku dhacaa «Khalad-waqtiga qaladka ´75´:
Qalabka 76 waxaa badanaa lala xiriiriyaa faylka aad adigu ka hadlaysid halka feylka la abuurayo.
Fikrad ahaan inaad u isticmaasho jidka buugga D: oo aan C: sababtoo ah marar badan ma lihid oggolaansho qoraal ah C:
Sidoo kale waa fikrad wanaagsan inaad dib u eegto goobaha bartilmaameedka gobalka sida miisaan iyo kala-goynta kala-guurka ah sida kumanaan kala-gooni.
Shaki kasta oo aad iigu sheegto.
Carlos Estopier isagu wuxuu leeyahay:
Hello, waxaan u isticmaalayaa Excel mac oo waxaan helayaa lambar khalad ah 76
Waalidiinta Antônio Felipe Abem waalidiin isagu wuxuu leeyahay:
Ku dhaji dhererka sare ee Google ee e-mail-ka Hart
Janaayo, 2018 at
qaabeynta aad leedahay waa sax.
Miyaad haysataa heerka Excel ama qaabeynta gobalka ee daaqadaha?
Si loo fududeeyo taageerada, waxaad u sameyn kartaa tifaftiraha emailka (at) geofumadas. tag
Francesca Mengozzi isagu wuxuu leeyahay:
Waad ku mahadsan tahay iigu soo diro xiriirka. Hadda, wax kasta oo uu sameeyo, wuxuu ii soo diraa North Pole.
Waxaan UTM N ugu horreyn iyo E dib u dhigayaa, ka dibna dib u noqoshada. Waxaan kumanaan kiilood ah u kala tagayaa oo ku dhuftay jajabyo iyo jajab tobanle.
Isku-duwaha ayaa ka yimid waqooyiga Chile (19 s).
Waxaa laguu diray xafiiska boostada, dhibaatadu waa in aad si sax ah u soo dirtay boostada,
waxaan u dirnay emailka saxda ah ee aad ku qortay.
Waxaan laba jeer bixiyay sheyga iyo waligay ma aanan helin template.
Miyaad i siin kartaa, fadlan?
Lambarka macaamilka waa 5SV58331V3337363F
Hi Carolina, waxaan horey kuugu soo dirnay isku xirka emaylkaaga. Waxay noqon kartaa inuu u aado spam.
Carolina Trujillo isagu wuxuu leeyahay:
Waad salaaman tahay, waxaan kuu sheegayaa inaan horey kuu siiyay laakiin adigu ima siin ikhtiyaarka aan ku soo dejisan karo. ka bixi paypal magaca Carolina Trujillo lambarka rasiidka wuxuu ahaa 797849290 × 9052642
Maarso, 2017 at
Waxaan durbadiiba u diray email-ka, in yar oo kiiskeena ku sharraxan.
Waad ku mahadsantahay aad iyo aad salaan.
Template waxaa loo qaabeeyey si loogu dhowaado dhibcaha 500.
Si loogu dhejiyo dhibco dheeraad ah, waxaa lagama maarmaan ah in wax laga beddelo koodhka. U dir shaxanka tifatiraha @ geofumadas waanan sii ballaarin doonnaa.
Waxaan isku dayeynaa inaan kordhino feylka, laakiin marka la furo feylka faylka ee google, waxaan heleynaa xogta ku habboon safka asalka ah ee xisaabta. Sidee baan u ballaarin karnaa si aan u soo bandhigno mugga dhibcooyinka aan u baahanahay? Miyuu leeyahay xadka dhibcood ee la soo bandhigi karo?
Subax wanaagsan Juan Pablo. Waxaan ka ceshannay xiriirinta emaylkaaga, si loo soo dejiyo. Waxaa suurta gal ah inay ku jirtay spam-kaaga.
Intaa waxaa dheer, waxaan dib u bixinnay lacagtii bixisay ee aad samaysay.
Haddii aad shaki qabtid, noo sheeg
Way i dul mariyeen faylka, waxaan bixiyay "tabarucaadda sumadda" laba jeer mana aanan helin foomka.
75 qalafsan macnaheedu waa in waddada aad qaadato aysan haysan xuquuqda qorista, halkii aad si toos ah ugu sameeyn lahayd disk C, waxaad isku daydaa cinwaan kale, subfolder ama E disk.
Jean Braga isagu wuxuu leeyahay:
Meu qaali, alterey si cadaadiska iyo khafiifka iyo xayawaanka aan lahayn dariishadaha daaqadaha, dhibaatadu way sii jirtaa.
«Error no tempo de execução '75':
Erro laga soo galo marinka wadada / arkiifiyada ».
Goobta ama qashin-qubka kml EM: C: \_ Career 25 X.kml
Detalhe: Xirfadaha Shaqada 25 X
Fadlan iga caawi xalinta dhibaatadan.
Waa qalad in la dhiso koorsooyinka.
Ama Ponto (.) Ea miira (,) waa in uu ku habboon yahay.
Tentei wax u beddelidda mascara way fiican tahay, laakiin não deu certo.
Sidee baa loo xalin karaa dhibaatadan?
Sidee ayey u fiicantahay
Wadiiqooyinka macaamiisha ee aad sameysid faylasha, tusaale ahaan
faylka: /// C: /Users/geofumadas/Pictures/005c_got.png
Hab sahlan oo lagu helo marinnada, furitaanka google chrome, oo halkan ka isticmaal 'ctrl + o' ka dibna raadso feylka. Magaalada url waxaad ku arki doontaa dariiqa.
Mar labaad mar labaad,
Waad ku mahadsan tahay caawimaad aad u badan, waxaan hore u xallinnay in fashilka, si kastaba ha ahaatee, su'aasheenu hadda waa sida loo galo sawirrada dhibcaha gudaha. Wadadee soo gali karnaa?
Subax wanaagsan, Gustavo.
Fiiri in qaabka gobalkaaga ee kombiyuutarkaaga, in kala-qoqobka kumanaan waa jajabka iyo qaabeynta jajab tobanlaha ah.
Haddii aad weli dhibaatooyin soo saartid, u qor tifaftiraha, dir feylkaaga macluumaadka aad soo gashay.
(tifaftiraha geofumadas. com)
Salaan si aad Oviedo
Anigu waxaan soo iibsaday template-ka Excel, marka la soo saaro faylka KML, waxaa la abuuraa laakiin isku-duwayaasha Google Earth ma muuqdaan goobtaada, waxay nagu qaadataa waqti kasta oo isku mid ah (North Pole).
Waxaan joognaa aagga waqooyiga ee Spain, fikradayada waxay tahay inaan isticmaalno template si aan u helno dhibcooyinka la qaaday iyo sawiradooda.
Juun, 2016 at
Mararka qaar waxay u tagtaa faylka boosta,
Calaamadee, iyo haddii ay dhibaato kaa haysato annaga naga soo dir emailka la socda macaamilka.
Patricio isagu wuxuu leeyahay:
Gacaliye, waxaan iibsaday iibka Paypal, laakiin weli ma helin emailka ah la xiriir link. Mudo intee le'eg ayey tahay wakhtiga sugitaanka?
Waxaan kuugu soo dirnay isku xirka boostada. Si kastaba ha noqotee, marwalba waa inaad aragtaa spam, mararka qaar halkaas ayey tagtaa.
Cristina isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan mar hore ka dhigay lacag bixinta Paypal, laakiin ma aan helin wax xiriir ah si aan u soo dejiyo template. Waxaan dib u eegay spam, mana muuqato mid kale. Intee in le'eg ayey qaadataa si loo helo boostada?
Waxaan hore u soo celinay qaabkii aad soo iibsatay laba jeer. Haddii aad dhibaatooyin badan qabtid, nala soo socodsii.
Waxaan kuugu jawaabnay boostada. Mararka qaarkood waxay u dhacdaa spam, laakiin waxaan kuugu soo gudbinay xiriirinta. Haddii aad dhibaatooyin qabto, nala soo socodsii.
CIRILO GIRALDO SALAZAR isagu wuxuu leeyahay:
Si loo buuxiyo aqoonsiyada macaamilka laga sameeyey PayPal waa:
Fadlan, waxaan rajeynayaa jawaab degdeg ah.
Xilligaan ... mahadsanid
Marwooyinka Geofumadas.com, Waxaan ku bixiyay PayPal badeecada "EXCEL TO GOOGLE EARTH FROM UTM COORDINATES" iyo waqtiga la soo dejinayo barnaamijka wuxuu dib iigu celiyaa PayPal, oo taas khalad ahaan mar kale $ 4.99 USD ayaa lagu soo oogay.
Uma maleynayo in la helo badeecadan barakeysan ee aan bixiyo ku dhowaad $ 10.00 USD.
Ii sheeg waxa aad sameyneyso si aad u soo dejiso barnaamijka ama inta ay tahay inaan sugo haddii ay i soo diraan emailkeyga shakhsi ahaaneed; waxa la sameeyo si loo soo celiyo lacag dheeraad ah oo aan ku sameeyo magacaaga.
Diseembar, 2015 at
Hubi spam. Mararka qaar halkaas ayuu tagaa. Haddii aad dhibaatooyin qabto, u qor emaylka ku yaal qaan-sheegashada.
Axad isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan soo iibsaday template ahna aanan helin boostada, sida aan sameeyo si ay ii soo diraan isku mid, Thanks.
Eeg emailkaaga Spam.
Mararka qaar halkaas ayuu tagaa. Haddii aad wax dhib ah ku qabtid, uga jawaab emailka ku qoran xaqiijinta lacag bixinta.
Carlos Choir isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan horay u dhigay lacag bixinta iyo feylka aan imid.
Beddel waddada halka feylka lagu kaydin doono.
Sida ugu fiicnayn, ma aha on disk C, laakiin on disk D, tan iyo qoraalka tooska ah ee C mararka qaarkood lama heli karo.
Dhibaato weyn ayaan ku qabay dhageysiga adag ee kombuyuutarka waana inaan badalaa. Waxaan rabay inaan isticmaalo foomka si ay UTM ugu gudbiso Google Earth waxayna igu siisaa fariin soo socota
Qalad 76 ayaa ka dhacday runtime
Wadada lama helin.
Waxay ku jirtaa boostadaada. Hubi in mararka qaar ay u dhacdo spam
Juan Carlos Vega isagu wuxuu leeyahay:
Hore ayaan bixiyay, xaggee ayaan ka soo dejiyey template ????
Qaabeynta waxaa loo sameeyay si loo geliyo xogta UTM. Tilmaamaha ayaa lagu dari karaa inay noqdaan jajab tobanle ama digrii / daqiiqado / seken.
Haa, waxaad ku dari kartaa sawirrada.
Wax ka beddel nooca astaamaha ... kuma jiro shaqeynta shaxanka hadda jira.
U habeynta shaxanka xaaladaha aad fileyso… waxay ku kacaysaa US $ 50.
joseluis isagu wuxuu leeyahay:
hi g! daqiiqado ka hor aad iga caawiyay geliyaan faylasha aan u Google Earth, Waxaan ahay xiiso this template Excel oo waxaan ahay mid diyaar u ah inay bixiso lacagta la codsaday, laakiin waxaan doonayaa inaan caddeeyo shaki qaar ka mid ah:
1-Waxaa loo bedeli karaa si loo isticmaalo darajooyinka, daqiiqadaha iyo saacadaha ama shahaadada jajab tobanle.
2-Waan ka beddeli karaa nooca sumadda adoo isku dubbaridaya.
3-Waxaan ku dari karaa sawirrada marxaladda.
Maxay noqon laheyd haddii isbedeladaas la sameeyay?
Waad ku mahadsan tahay waxtarkaaga ,,,,,,
Bogaga cusboonaysiinta, waa inaad aragtaa isku xiraha Soo Dejinta / iibsashada
Julian Morales isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa inaan helno qaab-dhismeedkan, waa la iibiyaa ama meesha aan ka heli karo
ramona isagu wuxuu leeyahay:
Diseembar, 2014 at
waxaad ku tilmaami kartaa meesha uu yahay isku xirka si loo soo dejiyo, ma heli karo maqaalkan
Sebtembar, 2014 at
Isticmaal xiriirka ku jira maqaalkan
Codsiga wuxuu u muuqdaa mid aad u fiican. Sideen u soo dejisan karaa?
Silvia isagu wuxuu leeyahay:
Juun, 2014 at
Sideen u soo dejiyaa foomka si aan u caddeeyo?
Hugo Montes de Oca isagu wuxuu leeyahay:
Qalab aad u wanaagsan oo fududeynaya shaqada xafiiska, salaan
Sergio isagu wuxuu leeyahay:
waxay u muuqataa codsi xiiso leh, waxaa lagama maarmaan in la caddeeyo
rafael isagu wuxuu leeyahay:
hello wanaagsan habeenkeyga dhibaatadaydu waa inaan marka hore soo baxay markii aan siiyay si aan u abuuro kml "75 qalad dil toogasho ah" ka dibna waxaan sameeyay wixii ay igu yiraahdeen "waxaan ku helay" Khalad dil XXX "waan sameyn karaa
Fadlan noo soo dir feylka si aad u eegto.
Illaa iyo hadda waxay si fiican u shaqeysey, waxay noqon kartaa in qaar ka mid ah aad soo bandhigto habka kale.
Mikel Belasko isagu wuxuu leeyahay:
Gaar ahaan waxay u tarjumaysaa latitude 32400.000000 iyo longitude -1.000000 ° Isticmaalka isku-duwayaal isku mid ah xisaabiyeyaasha beddelka, si kastaba ha noqotee, waxaan hubiyaa in macdanta asalka ah ay fiicantahay, maadaama aan ku hagaajinayo barta google dhulka, waxaan saaray iskuduwayaasha xisaabiyaha, sifiican bay ii dhigeysaa. Aad baad u mahadsantahay
Wax kastoo aan sameeyo (Wax walba ayaan u habeeyay si jajab tobanleyaashu ula socdaan muddo kumanaan ah oo ay la socdaan kumanaan konas) had iyo jeer waxay igu qaadanayaan dhulleyda. Mitirka dhaadheer waxaan u maleynayaa inuu ii fiican yahay, laakiin jiitankani waa 0. Gaar ahaan waxaan geliyay xogtan UTM ED50 ee aan wgs84 ka tirsaneyn Waqooyiga Isbaanishka (Navarra), oo si nidaamsan loogu soo afjaray Gacanka Guinea.
Koontada lacagta ijaariga ah waxay ku xiran tahay xisaab email kale oo waan ku qanacsanahay haddii aad u diri lahayd cinwaanka emailkan oo aan fariin u diray. Waad ku mahadsantihiin
Inta badan, waxaad dhibaato ku qabtaa kumanaan mitir.
Isku day inaad geliso isku-duwaha UTM ee isku-dhafan, iyada oo aan lahayn jadwal ama gusto si loo arko haddii ay tani tahay dhibaatada.
Kadib waxaad aadeysaa goobaha gobolka ee mashiinkaaga oo aad isbadal ku sameyso. Waxaa lagaa rabaa inaad comma u isticmaasho kumanaan gooni goosad ah iyo liis gooni ah; barta ahaan jiheeyaha jajab tobanle ah.
Waxaan sameeyay faylka laakiin markii aan ka daawanayo dhulka waxaay ii diraa cirifka N .. Waxaan kuu sheegayaa: isku-duwaha UTM ee aan isticmaalo waa laga beddelay isku-duwaha latitude iyo dhaadheer, laakiin aniga oo adeegsanaya buugga ED50 bedelkii WGS84. Miyay tahay inaan horay uga gudbo qaabka UTM ee loo isticmaalo Excel? Si kastaba ha noqotee, waxaan u qaatay in xitaa haddii aysan iswaafaqsaneyn, farqiga uusan noqon doonin mid aad u sarreeya, maxaa yeelay haddii aan isbarbar dhigo qaar ka mid ah isku-duwayaasha kuwa aan u adeegsado iyaga oo leh '' WX50 'iyaga oo jooga WGS84 (waxay ka soo jeedaan Spain), is-dhaafsiga waa dhowr mitir, laakiin khariidada Waxaan u maleynayaa inaadan waxba arki karin, xitaa xitaa sumadaha ku yaal sadarka "sumadaha". Fikrad kasta meesha aan ku qaldanahay? talaabooyinka iyo qaabka jajab tobanlaha ayaa u muuqda kuwo sax ah (soonaha waa 29 no?).
Waad ku mahadsan tahay Salaan!
GLORIA DOMINGUEZ isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u qoray beddelista juqraafi ahaan UTM, laakiin waxaan dhib ku qabaa feylasha si aan u soo saaro feylka si aad ugu aado Google haddii ay abuurto faylka laakiin dhibcaha oo dhan waxay ku sii jiraan 180grades 0minutes 0.00Seconds North oo leh Latitude 74 darajo 0 Daqiiqo iyo 0.00 sekanno Galbeedka sidoo kale ma muujineyso barta khariidada. Waan u mahadcelinayaa haddii aad i caawin karto. Gloria Dominguez
Eeg email spam, mararka qaar link link template u tago
Fadlan ii caddee sababta aanan u helin shaxanka ah inaan ku soo dejiyo faylalka google earth, si aan ugu gudbiyo isku-duwayaasha juquraafi ahaan UTM-ga. Waad mahadsantahay GEDL
Anagu si dhab ah iskuma dayin Mac IOS.
Waad ku mahadsan tahay jawaabtaada, Waan sameeyey wixii la ii sheegay. Dhibaatadu way sii waday, si kastaba ha noqotee, ka dib waxaan beddelay magaca loo xilsaaray faylka kml ee dhoofinta oo aan wanaajiyay shayga. Markii aan ka imid taageerada saaxiib, waxaan ka beddelay «\_ SIMV \_ MAPAS.000.000.000.kml» oo loo beddelo '\_ "SIMV \_ MAPS \_ test.kml". Haatan looma diro faylka loo diro dhoofinta laakiin ugu dambeyn faylka ayaa laga soo saaray, wuxuu ku jiraa isla faylka halka uu ka-faafaahu ku wanaagsan yahay.
Waxaan rajeynayaa inaad cadeeyn kartid qaladka, waxaan si fiican u shaqeeyay daaqadaha, laakiin hadda waxaan ka shaqeynayaa Mac oo halkaas ayaan tagnaa, haddii aad hayso wax soo jeedin ah ayaan ku qanacsanahay. Mar labaad ayaa mahadsan
Isku day inaad isticmaasho magac iyo jid fudud, tusaale ahaan:
Hubi inaad xaq u leedahay inaad ku qorto diiwaankaas, iskuday inaad abuurto fayl ka jira browser-ka.
Waxaan isku dayayaa in uu isticmaalo Mac ah, ii sheegayaa markii aan dhalin "qalad ayaa ka dhacay Runtime, magaca ama lambarka faylka qaldan '52'."
Waxay i siisaa afar doorasho, kan ugu horreeya ee la demiyey, waxaan runtii dooran karaa mid ka mid ah saddexdii ugu dambeysay:
1 Sii wad 2 Dhameystir 3.Depuration 4.Help
Waxaan dooranayaa Debug oo ka tago daaqad kaas oo leh:
Kala soocista KML ()
'Abuur KML Macro
'Macro waxaa loo tafatiray Geofumadas
Waa inaad u rogto qaabka kml
Waxaad taas ku sameyn kartaa gvSIG ama barnaamijyada kale ee GIS
antonio becerril isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u baahnahay in aan galo sawir google ah, sida aan sameeyo, sawirku waa wadada wadada ee isku duuban
Waxay noqon kartaa:
C: / khariidado /
Tan ugu waxqabadka badan ayaa ah in laga soo bilaabo biraawsarka bogga, ka fiiri cinwaanka si aad u aragto jidka, maxaa yeelay haddii aad leedahay magac waddo leh meel bannaan oo bannaan sida: «dukumintigayga», waa inaad ku qortaa sida ay u muuqato URL-ka biraawsarka.
Jorge Echeverria isagu wuxuu leeyahay:
Salaan miyaad iga caawin kartaan Waxaan helay "75 qaladka waqtiga degdega ah" waxaad i siisaa tusaalooyin ah "dariiqyada" abuuritaanka faylka loo yaqaan "kml file". tusaale dukumintigayga ama soo degsashada ama desktop-ka. Waad mahadsantahay
MOISES isagu wuxuu leeyahay:
Thanks, waxaan ku jiray spam.
Fiiri emailka SPAM, mararka qaarkood waxaa jira fariin la xiriirta xariirka tooska ah.
Si kasta ha ahaato si toos ah ayaan ugu dirnay emailkaaga.
Waxaan sameeyay lacag bixinta mushaharka laakiin feylka aan la soo dejin, haddii ay u baahan yihiin id. Waxaan u dirayaa macaamilka.
Sida kaliya ee aan u leenahay, waxaan isticmaaleynaa PayPal ama kaadhka amaahda / amaahda ee la xiriira PayPal.
JOSE RIVERA CABALLERO isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan si degdeg ah ugu baahanahay codsiga Excel ee codsiga Google Eaarth, laakiin waxaan haystaa kaadhka deynta.
Maxaan sameeyaa, haddii ay xiriir la leeyihiin Peru, si loo sameeyo bangiga?
Fadlan, waxaan u baahanahay codsigaan URGENCY.
Ii dir cinwaanka sawirka aad isticmaalayso si aad u tijaabiso oo aad u aragto waxa dhacaya.
Mararka qaar waa su'aal in marinku si liidata loo dhisay. Hal dariiqo oo lagu arko sida dariiqaasi u eg yahay ayaa ah in laga furo faylka sawirka biraawsarka, adigoo si sax ah u riixaya sawirka oo aad dooraneyso inaad la furto ... oo aad doorato biraawsarka; markaa waxaad eegaysaa dariiqa kore.
Ericson isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan isku dayay inaan sawir ka soo qaado jidka maxaliga ah laakiin ma shaqeynayo, marka aan soo galo jumlada markaad tilmaanto, sawirka waxaa lagu darayaa si gooni ah mana aha qayb ka mid ah qodobka dhibicda. Sidoo kale marka aan isku dayo inaan soo bandhigo sawirka kaliya ee shaxanka soo baxa laakiin ma aha sawirka.
Fiiri tabarka haddii aan ku xiranahay.
Haddii aadan ahayn, waxaad iigu qori kartaa editor@geofumadas.com
oo waxaan ballan ka qabannay.
Ana isagu wuxuu leeyahay:
Editor Good, Waxaan u baahanahay inaan kaala hadlo sheeko aad iibisay, ma i soo raaci kartaa chat?
Waa hagaag, ficil ahaan waxa habboon in la furo barnaamijka GIS oo dhoofiyo kml.
Haddii aysan ku habooneyn, u dir email-kayga waxaan kuu sheegi doonaa haddii aan ku caawin karo, sababtoo ah waxaan arki karaa qaabka miisaska.
Xisaabiyuhu ma fahmin waxaad u malaynayso
Xagee ka heli karaa caawimaad shaqsiyeed hanti dhowrka ... Waxaan si deg deg ah ugu baahanahay caawinaadaada, dhib malahan hadii ay kugu kacdo, mahadsanid.
waan ka xumahay inay ku jiraan qaabka ugu wanaagsan, 600 wax badan oo aan leeyahay waxaan ku jiraa heer sare.
Xiiso xiiso leh: Actans steels
Loolka: 20.654443 Longitude: -103.377499
Geesaha: (20.662213, -103.372706) (20.662213, -103.382293) (20.654444, -103.387087) (20.646674, -103.382293) (20.646674, -103.372706) (20.654444, -103.367912)
Tani waa waxa aan rabo inaan u beddelo qodobbada xiisaha nooca dhulka ee google, arrintu waxay tahay inay jiraan in ka badan 600 oo qodob oo xiisahay ah oo aan u baahanahay inaan ku faaruqo qaabka kml? Ma aqaan haddii aad sharraxdid ...
Noo sheeg tusaale ahaan sida xogta dhibtu u tahay, iyo qaabka ay yihiin.
Waad salaaman tahay ... waan ka xumahay waxaan u baahanahay inaan u beddelo feyl dhammaystiran oo ah qodobbada xiisaha leh iskudhafyadooda qaabka kml si aan ugu arko dhulka google ... qof ayaa i hagi kara, mahadsanid.
Waa hagaag, waan ku faraxsanahay inay shaqaysay.
mar kale iyo sida xaqiiqada ah waxaan xaq u hubiyaa inaad tegto waa in ay ahaadaan SEPARATOR dhibic jajab tobanle, SEPARATOR comma iyo comma kun sidoo kale SEPARATOR diyaar.
Diyaargarow, mahadsanid deeqda!
Anigu waan hubiyay waana sax, sidaasi waxay iigu soo dirtaa Indonesia.
Waxaa muuqata in khilaafka u dhexeeya cutubyada Excel iyo cutubyada loo diro.
Waxaad arki kartaa in guddi ilaalinta, goobaha gobolka. Fiiri in barta ay tahay kala-saarayaasha jajab tobanlaha iyo kala-soocayaasha kumanaanka iyo jamacadu sidoo kale kala-saarayaasha liiska.
Waxaan iyaga u qoray sidii ay ku tilmaameen:
792713.85 ee isku-xirka X
1127836.33 ee isku-duwaha Y
Oo waxaa jira daaqad leh oo odhanaysa:
'Khalad' 13 'ayaa dhacay waqtigii lagu jiray.
dhammeystirid, debug ama caawimo.
Noocyadu isbarbar dhigaan »
Waa qaabka dhibicda.
Waa inaad ku qortaa xogta foomka:
Tijaabi Sababtoo ah moodalku waa inuu tixgeliyaa doomaha inay kala baxaan kumanaanka iyo qodobbada lagu kala saarayo jajab tobanlaha; Waa inaad u isticmaashaa sidaas oo kale.
Kuwani waa iskujireyaal,
iyo marka aan sameeyo habka, iigu soo dira Indonesia, iskuduwayaashani waxay ka socdaan Jamhuuriyadda Bolivarianka Venezuela, wax soo jeedin ah?
Yorodis Ramírez isagu wuxuu leeyahay:
Dhammaan su'aalahaygii waa la jawaabay .. !!
Elia Gonzalez isagu wuxuu leeyahay:
Iska ilaali qaladka:
Baadi-waqtiga qaladka '75':
Qalabka / Access Access Error
Sababta oo ah waxaan xaddiday marin u helida wadista C: beddelaada wadada waxay abuurtaa iyada oo aan wax dhibaato ah. Waxaan isku dayi doonaa inaan sameeyo midka keena polygonga.
Waxaad u soo gali doontaa waddada kale, eeg in amarkaagu yahay Waqooyi, Bariga (Laad, Long)
halka ay ku qoran tahay qaab-dhismeedka ay ku jirto amarka North East (Long, Lat).
Waa inaad ka saartaa furayaasha, si ay u tiriyaan lambarrada.
Anigu waan tijaabiyey, dhab ahaantii waxay ku dhacdaa aaggaaga, mar kale isku day inaadna ogeysiiso.
Waxaan maleynayaa inaan sameyn doono cusbooneysiin sidaa daraadeed amarka isku-xireyaasha waa lat, dheer kaas oo ah inta badan isticmaalka ugu badan.
Halkan waxaan ka tagayaa iskudhafyada qaarkood ee lagu qaato duurka Dominican Republic iyada oo la raacayo sifooyinka soo socda:
Markii aan isku dayey inaan ku dhajiyo iyaga waxay ku dhaceen Koonfurta Ameerika.
Waad ku mahadsantihiin. !!
Waxaan kuu soo jeedinayaa inaad dib u eegto kuwan soo socda:
Xusuusnow in orthophotos of Google Earth ay barakacaan, kala duwanaansho kaladuwan. Marka marka la abuurayo isku-duwaha aad ogtahay, oo la socota sheyga, xaqiiji waxa isku xira Google Earth muujinaya, si aad u aragto haddii ay u dhigantaa waxaad ka dhoofisay shaygan iyada oo loo yaqaan 'Datum WGS84'.
Maxaa xiiso leh in la ansixiyo waa haddii iskudhafku isku xiro, si aysan u haysan qalad xisaabin.
Haddii isku duwaashahu iswaafajiyo, laakiin laga reebay sawirka, waxay noqon kartaa qaladku inuu ka yimid sawirka. Si kastaba ha noqotee waxaan soo jeedinayaa inay soo sheegaan khaladaadka ay arkaan, maadaama aan u soo saaray shaxanka si bilaash ah laakiin waxay u baahan tahay inay i siiyaan jawaab-celin la socosho.
Talaabada xigta waxay noqon doontaa in la abuuro fiiqan, waxaan arki doonaa maqaal kale.
Si aad u dhigto jidka tilmaan-bixiyaha deegaanka, hubi maqaalkani
Qaadashada feylku wuxuu ku jiraa jagada C: /Users/Usuario/Downloads/woopra_ios.png, ka dibna koodku wuxuu noqon lahaa:
src = »feyl: /// C: /Users/User/Downloads/woopra_ios.png»
Waa imisa xajmiga aagga 19?
Haddii aad iigu qori karto isuduwaha, si loo xaqiijiyo.
Waxay ku siinaysaa aragtida ah inaadan xaq u lahayn inaad ku qorto buugga tusaha C:
Tijaabi waddada dukumintiga isticmaalaha.
Ma hubtaa inaad isticmaasho WGS84?
Hubi, ma ogi haddii nidaamka dalkaaga uu leeyahay wax been ah.
Waa imisa xajmiga
Sigaar cab, maxaa yeelay si aad wax uga qorto arrimahan waa inaad sigaar ku cabtaa sigaarka ... Hehe.
Marcos Diaz isagu wuxuu leeyahay:
waad ku mahadsantihiin waxtarka .. KUSAABSAN .. !!
(Waa maxay sababta Geofumadas ??)
Anigu waxaan sameeynayaa habka sawirrada sawirada laga soo ururiyey, oo aan kugula talin kari waayay, haddii aad ka sii badin kartid sidii aad u sameyn laheyd tan iyo markii ay ka shaqeysey aniga oo aan sawir ka sameysanayo faylasha websaydhka.
Waxaan sidoo kale galay isuduweyaasha soonaha 'Zone 19N' oo xogtuna si buuxda ayey u barakacday.
Mahadsanaan kun ... !!
Sare Santana isagu wuxuu leeyahay:
Liiska liiska isku-duwaha UTM, oo leh 19, qaybta waqooyi-galbeed, gaar ahaan Dominikan Jamhuuriyadda, waxay ku dhacdaa labadaba goobaha iyo iskudhacyadaas. Waxaan ku soo celiyay habka dhowr jeer, xogta kala duwan iyo natiijada waxay ahayd isku mid. Waad ku mahadsantihiin inaad horay u soo gashay walaacadayda.
Waxaan ka fekerayaa waxa ku saabsan, waxaan u maleynayaa inay noqon doonto nooca 2 ee qaab-dhismeedkan, sida aan sameynay mid ka mid ah dhibcaha u soo diraya oo tilmaamaya AutoCAD
Waxaan helayaa qaladka:
Sababtoo ah waa in aan marka hore soo saarno feylaal bannaan?
Waxaan isku dayi doonaa inaan fahmo sida ay u shaqeeyaan macruufka, maxaa yeelay waxay ila tahay tan tan, way sahlanaan doontaa in la soo saaro geesoolayaal leh geesaha la soo galay. Salaan wanaagsan…